खेलकूद पत्रकार राजवंशीलाई मातृशोक, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
खेलकूद पत्रकार राजवंशीलाई मातृशोक
काठमाडौँ । पत्रकार एवं नेपाल खेलकूद पत्रकार मञ्चका पूर्वअध्यक्ष निरञ्जन राजवंशीलाई मातृशोक परेको छ ।
विगत ६ महीनादेखि मिर्गौलाकोे उपचार गराइरहनुभएकी उहाँकी ७४ वर्षीया आमा राधा राजवंशीको आज उपचारको क्रममा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको हो ।
स्वर्गीय राजवंशीका दुई छोरा र चार छोरी छन् । आजै उनको पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरियो।यसैबीच, मञ्चले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै पत्रकार राजवंशीका शोकाकूल परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेको छ।